Football Khabar » एथ्लेटिको मड्रिडविरुद्ध खेल्ने युभेन्टसको टोली घोषणा : को–को परे ?
एथ्लेटिको मड्रिडविरुद्ध खेल्ने युभेन्टसको टोली घोषणा : को–को परे ?
प्रि–सिजनका रूपमा खेलाइएको इन्टरनेसनल च्याम्पियन्स कपको अन्तिम खेलमा इटालियन युभेन्टस र स्पेनिस क्लब एथ्लेटिको मड्रिड खेल्दैछन् । सो खेलका लागि युभेन्टसले आफ्नो २५ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ । खेल नेपाली समयअनुसार भोलि (शनिबार) राति हुनेछ ।
सार्वजनिक टोलीमा सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोदेखि पछिल्लो समय सरुवा चर्चामा रहेका पाउलो डिबाल परेका छन् । त्यसैगरी, अघिल्लो दिन मात्रै युभेन्टसले इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीबाट अनुबन्ध गरेका ब्राजिलियन राइट ब्याक ड्यानिलो पनि टोलीमा परेका छन् ।
युभेन्टस र एथ्लेटिको गत सिजन युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ मा भिडेका थिए । जहाँ पहिलो लेगमा एथ्लेटिकोले युभेन्टसलाई २–० ले हराए पनि आफ्नो घरमा युभेन्टसले एथ्लेटिकोलाई ३–० ले स्तब्ध बनाएको थियो । सो खेलमा रोनाल्डोले सनसनीपूर्ण ह्याट्रिक गरेका थिए ।
सो खेलपछि युरोपका यी दुई बलिया टिम पुनः आमनेसामने हुन लागेका हुन् । यस खेलमा यसअघि प्रतिबन्धमा परेको एथ्लेटिकोका डिएगो कोस्टा उपलब्ध हुनेछन् ।
यस्तो छ युभेन्टसको टोली :
प्रकाशित मिति २४ श्रावण २०७६, शुक्रबार १५:२७